Iindaba -Umahluko phakathi kwe-dumbbell squat kunye ne-barbell squat
Ngenkqubela phambili yoluntu, iikhonsepthi zobuhle babantu zihlala ziguquka. Kangangexesha elide, imigangatho yobuhle yokubhitya njengobuhle igcwele. Ngokuthe ngcembe, abantu abasaphishekeli ukulahleka kobunzima obugqithisileyo, kodwa banikela ingqalelo ngakumbi kwimpilo. ingxaki. Kule mihla, ukomelela komzimba kuya kusanda. Abantu banokusebenzisa ukomelela ekufezekiseni injongo yokomeleza imizimba yabo kunye nokumila komzimba ogqibeleleyo. Kwinkqubo yokomelela komzimba, i-squat yintshukumo yodidi oludala kakhulu. Ke yintoni umahluko phakathi kwe-dumbbell squat kunye ne-barbell squat?
Izixhobo zoqeqesho ezahlukeneyo
Nangona bonke besenza squats, izixhobo ezisetyenzisiweyo zahlukile, umphumo uya kwahluka ngokupheleleyo. I-Dumbbell squats kunye ne-barbell squats zisebenzisa izixhobo zoqeqesho ezahlukileyo ngokupheleleyo. Umahluko phakathi kwe-dumbbells kunye ne-barbells usemkhulu kakhulu, kwaye ukwakheka kwezi zimbini kwahluke ngokupheleleyo. Ngokukodwa ngokobunzima, ubunzima beedumbbells buncinci. Kwimithambo ejingayo, eyona dumbbell inzima imalunga ne-60 kg kuphela. Inqanaba lobunzima beebarbells likhulu kakhulu, kubandakanya i-250 kg, i-600 kg kunye ne-1000 kg.
Umthwalo woqeqesho ohlukileyo
Iidumbbell squats ziqeqesha ubunzima ngoncedo lwee-dumbbells, ezinokuthi zenze ukuba ii-squats zisebenze ngakumbi. Xa kuthelekiswa ne-barbell squats, i-dumbbell squats ilula kakhulu. Ngokukodwa kubaqeqeshi abasele bekwazi ukwenza i-squats, ukuba ufuna ukuya phambili, ungaqala nge-dumbbell squats. Nokuba awunakubuthwala ubunzima beedumbbells, awunakukhathazeka ngemicimbi yezokhuseleko, yiyeke nje. I-barbell squat iyingozi kwaye ifuna uncedo lwezixhobo ezizodwa okanye abanonopheli.
Abantu abahlukeneyo abasebenzayo
I-barbell squat inzima kakhulu kunobunzulu be-dumbbell, kwaye umphumo wendalo ubonakala ngakumbi. Ukuba umqeqeshi ufuna nje ukwenza eyakhe imigca ibe mihle ngakumbi kwaye igudile, kwaye angayilandeli imvakalelo yezihlunu, ii-dumbbell squats zinokuhlangabezana nemfuno. Ukuba umqeqeshi ufuna ukufezekisa isiphumo esithile soqeqesho lwezihlunu, kuyimfuneko ukusebenzisa i-barbell ukwenza i-squats. Ke ngoko, i-dumbbell squats kunye ne-barbell squats zilungele abantu abohlukeneyo. Yeyiphi oyikhethayo ixhomekeke kwiimfuno zakho.